Netflix मा शीर्ष 10 स्पेनिश डब एनिमे [इन्सर्ट क्लिपहरूको साथ] - क्र्याडल दृश्य
स्पेनिश मा एनिमे - पूर्ण सूची
by Dima 31st अक्टोबर 2020 12th जनवरी 2022
1 टिप्पणी Netflix मा शीर्ष 10 स्पेनिश डब गरिएको एनिमेमा [क्लिप सम्मिलित गर्नुहोस्]
नेटफ्लिक्समा स्पेनिश डब गरिएको एनिमे द्रुत रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। नेटफ्लिक्सको साथ अब नयाँ र पुराना कार्यक्रमहरू एकै किसिमले डब गर्दै, नेटफ्लिक्सले प्रस्ताव गरेको स्पेनिस डबहरूका साथ केही उत्कृष्ट एनिमहरू हेर्ने समय हो। यस सूचीमा, हामी इन्सर्ट क्लिपहरू पनि समावेश गर्दैछौं ताकि तपाईंले तिनीहरूको स्प्यानिशमा आवाज कस्तो छ भन्ने महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सबै एनिमहरू तल लिङ्क गरिएका छन् र क्र्याडल दृश्य तारा मूल्याङ्कन दिइएको छ। कृपया यो सूचीको आनन्द लिनुहोस्।
[कुनै खेल छैन जीवन सीजन १, एपिसोड]]
पौराणिक गेमर दाजुभाइ सोरा र शिरोलाई संसारमा सारिएको छ जहाँ जीवन खेलहरूको श्रृंखला हो र मानवता लोप हुने गम्भीर खतरामा छ। अब डिस्बोर्डको खेल-केन्द्रित क्षेत्रमा बस्दै, सोराले एक धूर्त पोकर खेलाडीलाई पछाडी पार्छ, र ऊ र शिरोले नयाँ घर खोज्न थाल्छन्। के तिनीहरू आफ्नो भिन्नताहरू हटाउन र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्षम हुनेछन्? त्यहाँ हाल 1 सिजन र 12 एपिसोडहरूको साथ एक स्पेनिश डब छ।
Japan। जापान सिंक २०२०
जापान सिंक [सत्र १, एपिसोड १]
जापान सिंकले १ 14 बर्षे ट्र्याक स्टार आयुमु मुतो र उनको परिवारलाई १० बर्षे पुरानो भिडियो गेम आवेगक भाइ जी, धूर्त र भरपर्दो बुबा कोचिराइ, र आशावादी, पूर्व प्रतिस्पर्धी स्विमर आमा मारीलाई पछ्याए: जापानबाट भाग्न खोज्दा विनाशकारी भूकम्पहरूको श्रृंखलाको अनुभव पछि प्रशान्त महासागरमा डुब्दै छ। टापु राष्ट्र भर मा उनको यात्रा को दौरान, परिवार को धेरै वर्णहरु को लागी आउँछ जसले उनीहरूलाई आफ्नो यात्रामा सहयोग गर्दछ। हाल १० एपिसोडको साथ १ सीजन छ।
Kab. फलाम किल्लाको काबनेरी
[भाग १ एपिसोड]]
बाँचेकाहरूको ठूलो समूहले ट्रेनमा यात्रा गर्दा शरण खोज्छ जब तिनीहरूको स्टेशनमा आक्रामक, मरेका जीवहरू काबानेले आक्रमण गरेपछि। जब संसार औद्योगिक क्रान्तिको बीचमा छ, एक राक्षस देखा पर्दछ जसलाई हराउन सकिँदैन जबसम्म यसको हृदय, जसलाई एक तहले सुरक्षित गरिएको छैन। फलाम, छेडेको छ। केही दर्शकहरूले यसलाई यसरी वर्णन गरेका छन्: “टाइटनमा भएको आक्रमणले हिउँ-पाईसरलाई भेट्छ, द वाकि De डेडलाई भेट्छ” तपाईले के लिनुहुन्छ त्यसबाट लिनुहोस्।
Can. क्यानन बस्टरहरू
[सत्र १, एपिसोड]]
साम एक मैत्री रोबोट हो जो बोडिकाका शक्तिशाली मित्र प्रिन्स केल्बीबाट छुट्टिएकी थिए जब बोडिकामा शक्तिशाली आक्रमणकारीहरूले आक्रमण गरे। उनी उनीसँग गाड्स किपमा पुनर्मिलन गर्न चाहान्छिन् जुन बोडिकन शाही परिवारको लागि परम्परागत सुरक्षित बिन्दु हो। बाटोमा, उनी मर्मतसम्भार गर्दछन् 'बोट क्यासी र चाहिएको आउटलाउ फिलि किड, धेरै पछिको चोग्रिनसँग। यदि तपाईं अधिक सामना गरिएको पेस, कार्य प्याक, स्पेनिश डब एनिमको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यानाउन बस्टर तपाईंको साथी हो। संसार खतरनाक ठाउँ हो भने पनि यदि तपाईको यातायातको तरीका ठूलो कार हो जुन षड्यन्त्रयुक्त मेचामा परिणत हुन सक्दछ चार क्वार्टरहरू यसको स्लटमा सम्मिलित गरेर, तर फिलिको बाहुलामा अतिरिक्त ऐस छ: ऊ जादूगरको श्रापका लागि अमर धन्यवाद छ। । साम आँखालाई भेट्ने भन्दा पनि धेरै छ, र जो कोही उनको नयाँ साथीलाई जोखिममा पार्छ! त्यहाँ हाल १२ एपिसोडको एक सीजन छ।
Van) इभान्जेलियनको अन्त्य
ईन्जेलियनको अन्त्य दोस्रो फिल्म हो नियन उत्पत्ति Evangelion फ्रन्चाइजी, र श्रृंखला को लागी अन्तिम एनीम रिलीज Evangelion को पुनर्निर्माण टेट्रालजी। यो एपिसोड 24 पछि भएको टिभी शृङ्खलाको वैकल्पिक अन्त्य थियो। फिल्म जुलाई 19, 1997 मा रिलिज भएको थियो। स्पेनिस डब गरिएको एनिमे संस्करणलाई लगभग 45-मिनेटका दुई एपिसोडहरूमा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येकलाई गेनाक्सद्वारा माध्यमिक अंग्रेजी शीर्षक दिइएको छ। हामी तपाईंलाई यो चलचित्र हेर्न सुझाव दिन्छौं किनकि त्यहाँ स्पेनिस डब हाल उपलब्ध छ। हामीले यो चलचित्र हेर्नु भन्दा पहिले टिभी कार्यक्रम हेर्ने सुझाव दिन्छौं।
मूलरूपमा the ० को दशकमा रिलीज गरिएको, बाकीले एक योद्धाको कथा अनुसरण गर्दछ, जसलाई बाकी दि ग्रेप्लर भनिन्छ। क्रूर भूमिगत टूर्नामेन्टबाट विजयी भए पछि, बाकी आफ्नो बुबा, युजुिरौलाई हराउनको लागि आफ्नो बाटोमा लागिरहे, जो विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे हो। जे होस्, उनी आराम गर्ने फुर्सत पाउँदैनन् जब टूर्नामेन्ट रनर टोकुगावा मित्सुनारी स्कूलमा उसलाई भेट्छन्। उनले बाकीलाई भने कि संसारभरका inc जना अविश्वसनीय खतरनाक मृत्युदण्डका कैदीहरू - जसमा सबै मार्शल आर्टमा कुशल छन् - एकै साथ कैदमा परेका छन र टोकियो गइरहेका छन्। स्पेनिश डबिड एनिम संस्करणसँग se सत्रहरू छन्: सीजन १ भाग १, सीजन १ भाग २, र दि ग्रेट रायताई टूर्नामेंट सागा।
Great. The Great Pretender
सिजन 1, प्रकरण 2
यस श्रृंखलाले मकोटो एडामुरालाई पछ्यायो, जो जापानका आधुनिक समयका, सानो समयका मानिस हुन्, जो फ्रान्सेली सज्जन चोर लौरेन्ट थियरीले टोकियोबाट लस एन्जलसको पछि लागेर उनलाई ठग्छन्। त्यहाँ, Laurent एक शक्तिशाली फिल्म निर्माता / माफिया नक्कली ड्रग सौदा मा लाखौं बाहिर डण्ड ठगेर आफ्नो षड्यन्त्रमा एडामुरा उलझे। यस स्प्यानिश डबड एनिमसँग हाल १ सत्र छ १ with एपिसोडसहित, यद्यपि धेरै एपिसोडहरू चाप भन्दा बाहिर फैलिएका हुन्छन् जुन कहिलेकाँही 1-14-। एपिसोडहरू सम्मिलित हुन्छन्। त्यहाँ २aनोभेम्बर आउने मौसम पनि छ।
Seven. सात बीज
7 बीजले खगोलविद्हरूको समूहको कथा बताउँछ जसले सही रूपमा पृथ्वीलाई उल्कापिण्डले ठक्कर दिने भविष्यवाणी गर्छ। सेभेन सीड्स परियोजनाले प्रत्येक देशका युवा व्यक्तिहरूको एउटा समूह लिन्छ र उनीहरूलाई उल्काको प्रभावबाट बच्नका लागि क्रायोनिक रूपमा संरक्षित गरिएको देख्छ। यो कम्प्युटरले निर्धारण गर्नेछ कि पृथ्वीले मानव जीवनलाई समर्थन गर्न सक्छ र प्रत्येक समूहलाई पुनर्जीवित गर्नेछ। तर ब्यूँझने बित्तिकै, बाँचेकाहरूको समूहलाई शत्रुतापूर्ण, अज्ञात संसारमा अभिवादन गरिन्छ, मानव जीवनबाट रहित। यो स्पेनिश डब गरिएको एनिमे अहिले धमाधम उडिरहेको देखिन्छ र हामी तपाईंलाई भाग १ (१२ एपिसोडहरू) र भाग २ (१२ एपिसोडहरू) दुवैमा स्पेनिश डबहरू छन् भनी बताउन पाउँदा खुसी छौं। यो शृङ्खला एकदमै अनौठो छ र हामी यो भन्न सक्छौं कि यो क्लासरूम अफ द एलिटसँग अलि मिल्दोजुल्दो छ, फिटेस्ट न्‍यारेटिभको अस्तित्व पछ्याउँदै।
[काकेगुरुइ सत्र १, एपिसोड]]
जूवाको वरिपरि केन्द्रित यो द्रुत गति नाटक धेरैको बीच फ्यान मनपर्ने हो। काकेगुरुइ नाम गरेको स्पेनी डबड एनिमेमा लगातार दुई सीजनहरू छन् जुन दुबै १२ भागमा छन्। यदि तपाईंले Kakegurui देख्नु भएको छैन यो एक स्कूल वरिपरि केन्द्र हुन्छ जुन प्रोत्साहन र जुवा अभ्यास। शिक्षकहरू कहिँ पनि हेर्न सकिदैनन् र सबैले जुवा खेल्ने कुरामा आशा राख्छन्, यदि तपाईं debtणमा डुब्नुभयो भने तपाईं घर घरपालुवा जनावर बन्नुहुनेछ। यसको मतलब तपाईले सबैका आज्ञाहरू पालना गर्नु पर्छ।
विद्यार्थीहरूलाई थप जुवा खेलेर debtण लिनका लागि प्रोत्साहित गरिन्छ। यो युकेन्को जाबामीलाई एकेडेमीमा पछ्याउँछिन्, उनीले छात्र परिषदलाई लिने र खुला जुवा खेलमा उनीहरूलाई हराउने लक्ष्य राखी, उनीले केही सहयोगको खाँचो छ यदि उसले यो गर्न गइरहेको छ भने। यो एक धेरै छिटो पेस र तनावग्रस्त एनिमेस हो जुन शर्त जुवा पुरस्कारहरू र फफिटहरूमा धेरै भाग लिन्छ, यो तपाईंको समयको लायक हो यदि तपाईंले हेर्नुभएको छैन भने।
तपाईं Kakegurui को एक प्रशंसक हो?
यो जाँच गर्न विचार गर्नुहोस् उत्पादन:
१. कालो लगुन
यसको कुनै परिचय आवश्यक पर्दैन, यो २०० 2006 देखिको हो र यो आफ्नो समयको सब भन्दा लोकप्रिय र प्रतिष्ठित एनिमेटेड श्रृंखला हो। यो श्रृंखला समुद्री डाकुहरूको टोलीलाई पछ्याउँछ जसले जापानी व्यापारीलाई आफ्नो कम्पनीको लागि बहुमूल्य सम्पत्ति ढुवानी गर्न कैद गर्दछ। केही एक्सचेन्जहरू हुन्छन् र यो बुझे पछि ऊ फिरौती लिन मिल्दैन उसले उनीहरुलाई दिन्छ र उनीहरुसंग मिल्छ जब उसलाई हाकिमले स्वतन्त्र पारे पछि उसलाई के भयो भन्ने बारे मतलब गरेन। चालक दलले धेरै काम र पैसाका लागि अपरेशनमा भाग लिन्छ, र यीको प्रभाव जापानी मानिस रकमा पनी छ, हामीले उसको संक्रमण देख्यौं। यदि तपाईंसँग पहिल्यै नै होईन भने हामी तपाईंलाई निश्चित रूपमा कालो लगुनको स्पेनिश डबलाई जान सुझाव दिन्छौं, हामी सोच्दैनौं कि तपाईंलाई अफसोस हुनेछ। ब्ल्याक लगुनको स्प्यानिश डब एनिम संस्करणमा लगातार २ सीजन दुबै दुबै र एक OVA "रोबर्टाको रक्त ट्रेल" भनिन्छ जसमा स्पेनी डब पनि छ।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले यस लेख पढ्नु भएकोमा रमाईलो र रमाईलो हुनुभयो। यदि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भने, कृपया एक लाइक छोड्नुहोस् र यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने साझा गर्नुहोस्। साथै तल तपाईं हाम्रो स्टोर मा केहि उत्पादनहरु मा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ:
यदि तपाईंले यस सूचीको आनन्द लिनुभयो र यो उपयोगी पाएमा कृपया हाम्रो अन्य पोष्टहरू जाँच गर्न विचार गर्नुहोस्। अर्को कार्य मनपर्‍यो र टिप्पणी गर्नुहोस्, साथै यो लेख साझा गर्नुहोस्। कुनै पनि कार्य ठूलो सराहना हुनेछ। पढ्नका लागि धन्यबाद, सुरक्षित रहनुहोस् र एक उत्तम दिन होस्।
टैग: 7seeds7seedsspanishdub 7seedsspanishdubbednetflix7बीज स्पेनिस डब संस्करण 7seedsspanishdubbedversionnetflix anime español anime español प्यारा भर् नेटिफ्लिक्स anime español प्यारा Ver anime प्यारा Ver एन नेटफ्लिक्स animeenespanol anime नि: शुल्क animenetflix डब गरिएको animenetflixspaindub animenetflixspanishdubbed animeonnetflix animeonnetflixspain animethatisspnavdubbed bakinetflix bakispanishdub bakispanishdubbedversion bakispanishdubedversionnetflix bakispanishdubnetflix bakispanishdubversion कालो लगून ब्ल्याकलागुनइन्सस्पनिश्वाच्नो ब्ल्याकलेगुनवेसनसोंडेट ब्ल्याकलागुनवसेसनरेलिडेट blacklagoonseason4 कालो बगैहरु ब्ल्याकलागुनस्पेनवर्सन ब्ल्याकलागुनस्पनिस्डब ब्ल्याकलागुनस्पनिस्डडबनेटफ्लिक्सर्भसन ब्ल्याकलागुनस्पनिस्ड ड्युबोननेटफ्लिक्स कालो खाल ब्ल्याकलागुनस्पनिस्वाइओभर cannonbustersspanishdub क्याननबस्टर्सस्पैनिश डब संस्करण cannonbustersspanishdubnetflix español anime españolanime freeanime फ्रीस्पेनिशडबेडेनिम Howcaniwatchspanishdubbedanime howtowatchanimeinspनिश howtowatchblacklagoooninspनिश जापानसिन्स्पेनिस्डब जापानसिन्स्स्पेनिस्ड डब्बेडोननेटफ्लिक्स japanssinksspanishdubbed kabanerioftheironfortressnetflixspanishdub kabanerioftheironfortressnetflixspanishdubversion kabanerioftheironfortressspनिशdub kabanerioftheironforttressspanishdubbed kabanerioftheironfortressspanishdubbedversion kabanerioftheironfortressspanishdubonnetflix काकाडुबिन्सपनिस kakegurui kakeguruidub kakeguruidubenespanol kakeguruispanishdub kakeguruispanishdubbedversion kakeguruispanishdubbedversionnetflix kakeguruispanishdubonnetflix kakeguruispanishdubwathonnetflix neflixjapansinksspनिशdubbed नेटफ्लिक्सनैम netflixanimeseriesmoviewatch नेटफ्लिक्सनिमेस्पनिस netflixseriesanime नेटफ्लिक्ससेरीसनिमेवाच्नो नेटफ्लिक्ससेरिस्मेनिमेडबब्ड nogamenolifespनिशdub nogamenolifespनिशdubonnetflix serie de anime española para ver en नेटफ्लिक्स serie española para ver en नेटफ्लिक्स सेभेनस्पेनिस्डब सेभेनस्पेनिस्ड डबडभर्सन स्पेनमेनिम स्पेनिश भाषा स्पेनिश चलचित्र स्पेनिश एनिमेसरीहरू स्पेनिश animetowatch स्प्यानीमेटोवाचकननेटफ्लिक्स स्पेनिश एनिमेटोवाचनेटफ्लिक्स श्रृंखला स्पेनिशaubbedmoviesonnetflix स्पेनिशडुबानिमसेरीज स्पेनिशडुबानिमेटोवाच स्पेनिशडबेडेनिम स्प्यानिशडबेबेडेनिमेमोविएसननेटफ्लिक्स स्पेनिशडबबेडनिमेमनेटफ्लिस्टवाच स्पेनिशडबेडेनिमेवाच स्पेनिशनेटफ्लिक्सनाइम theendofevangelionnetflixspanishdub theendofevangelionsspanishdubbedversion thegretpretender thegretpretenderspanishdub thegretpretenderspanishdubbed thegretpretenderspanishdubbedversion thegretpretenderspanishdubbedversionnetflix शीर्ष १० anime español प्यारा ver top10animetowatchonnetflix top10spanishdubanimetowatch top10spanishdubanimetowatchonnetflix top10spnavdubbedanimetowatchonnetflix वाचस्पनिस्डडबेडेनिमे वाचस्पनिष्टडबबेडनिमेउ वाचस्पनिस्डडबेडेनिमेनेनेटफ्लिक्स स्पेनी डबडेनिमा हेर्ने wherecaniwatchspanishdubanime wherecaniwatchspanishdubbedanime जहाँ स्पेनिसदुबनिमे भेटिन्छ howtowatchspanishdubanimeforfree howtowatchspanishdubbedanime
अघिल्लो प्रविष्टि एक मौन आवाज लायक हेरिरहेको छ?
अर्को प्रविष्टि Hyouka - के एक मौसम2सम्भव छ?